WAA MAXAY SALVIA FAA'IIDO LEH, CODSIYADA IYO SIFOOYINKA DAAWADA DHIRTA - DAAWADA DADWEYNAHA
Faa'iidooyinka caleemaha daawooyinka: sifooyinka daawooyinka ee dhirta iyo ka hortagga
Magaca dhirta dhirta ee dhawaaqa luuqada sida salvia "salvere", taas oo macneheedu yahay - inuu noqdo mid caafimaad qaba. Hippocrates weyn ayaa ka hadlay salvia iyadoo la tixgelinayo "cawska xayawaanka", Giriiggii hore ayaa ku dooday in dhirta ay tahay warshad lagu guuleysto geerida. Salvia (Sage) waxay leedahay noocyo badan, mana aha wax sahlan in la kala saaro nooca sageed ee daawada.
Ubaxyada beerta leh ubaxyo cas, midab madow iyo midab buluug ah, ayaa soo ururiyay rucubyo khafiif ah. Waxay ilaa dhammaadka September waxay qurxiyaan sariiraha iyo rabatki. In dadka, dhirta waxaa loo yaqaan salvia. Waxaa jira cage salary - Salvia sclarea. Oo waxaa jira daaweyn caafimaad - Salvia officinalis.
Salvia officinalis: Sharaxaad
Salvia (sage) - geedka dilka ah. Sage wuxuu koraa nus dheriga. Geedka asalkiisu waa adag yahay oo adag yahay saldhigga baadiyaha. Kuurku si fiican ayuu u dillaacsan yahay, korna uma kici karo in ka badan nus mitir. Kaabashka caleemo saameeya. Caleemaha buluuga ah ama lilac yar oo ah daawo sage ah ayaa leh lugta gaaban waxaana lagu ururiyaa qaabka dhegta. Caleemaha caleenta ah ayaa sarreeya, cagaaran oo cufan, oo leh jajab yar oo aan caddaalad ahayn ee saxanka caleen. Goobta dabiiciga ah ee dabka - meelaha sare ee Mediterranean. Meelaha aan deganahay, daawo dhirta ayaa xidid ku leh sariiraha ubaxa, waa la jecel yahay oo waan ku qaddarinnay by bannaanka u uraya ur wanaagsan iyo bogsiinta guryaha. Warshad waa warshad qajilan oo cajiib leh, iyo malab lagu qasi karo midabka quruxda leh, madow oo leh sheen dahab ah.
Qaybta kiimikada ee lagu magacaabo daawada salka
Sage waa hodan flavonoids, alkaloids iyo fareeshka, phytoncides iyo qadhaadh. Waxay leedahay oleeyeelka, fedraalka iyo kiimikooyinka chlorogenic. Warshadu waa alaab-qeybiye nicotinic acid, qadhaadh iyo phytoncids. Sage saliida lagama maarmaanka u yahay qiimaha sare xeryaha terpene.
Laga soo bilaabo cagaaran salvia (sage) emit camphor. Saliida qumbaha - qalabka ugu muhiimsan ee daaweynta boogaha cadaadiska ee bukaanka bedridden.
Waa maxay faa'iidada daawada ee faa'iido leh?
Waxay muddo dheer ku jirtay isticmaalka si loo daaweeyo cudurrada viral, cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirka, beerka iyo kelyaha.
Ma taqaanaa? In sage, ma aha oo kaliya caleemaha, ubaxa iyo abuurka yihiin daaweyn, laakiin sidoo kale xididdada.
Sage Roots iyo sifooyinkiisa ayaa muddo dheer loo adeegsaday sidii xanuunka loo yaqaan 'rotatism', laab xanuun iyo xanuun ku dhaca xubnaha. Marka caabuqa qanjidhada nudaha, furunculosis, naaso-xanuun iyo miyir-beelka 'myalgicheskoy'.
Diyaargarowoo ay ku jiraan sage officinalis, oo loo isticmaalo boogaha iyo jirada maqaarka. Sage wuxuu ka caawiyaa kiisaska gingivitis, mumps, gubasho iyo boogaha. Gynecology, sage and preparations oo ku saleysan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa, badanaa oo ah qaabka dooxooyinka, shumacyada iyo looska oo leh decoction.
Sidoo kale, geedaha waxaa loo isticmaalaa daaweynta dhalmo la'aanta haweenka. Salvia officinalis waa warshad aan caadi ahayn, iyo sifooyinka waxtarka leh waa mid gaar ah. Waxay ka caawisaa geedi socodka bararka, waxay kor u qaadaa xinjirta dhiigga waxayna leedahay suufin.
Isticmaalka sage ee daawada dabiiciga ah
Warshadani waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed ee daaweynta cudurrada kala duwan iyo ujeedooyinka qurxinta.
Sidee heeso loo daaweeyo qabow
Xasaasiyadda, boronkiitada, dhuunta xanuunka, dhuunta dhuunta, raacso neefta.
Shaaha Sage leh Honey waxay caawisaa qufaca Wixii diyaarinta shaaha sida 1 tbsp. beedka iyo caleemaha ku shub 1 tbsp. biyo karkaraya oo loo oggol yahay inay istaagaan rubuc saacad ah, ka dibna kala diri faleebada 1 tbsp. qaaddo malab. Qeybtan dabiiciga ah ayaa sakhraanaysa 3 jeer maalintii.
Iyada oo hiinraagid iyo hargab, bronchi noqdaan neefsashada: Saliida Sage (1-2 g) waxaa lagu qoyay biyo kulul oo ka hooseeya kulaylka hoose, daboolay tuwaalkana si taxadar leh u neefso jajabka dhirta.
Haddii aad ka shakisan tahay in oof-wareenka la diyaariyey decoction: 2 tbsp. digaagadda qaadday ku shubtay hal galaas oo caano ah. Karkari iyo walaaq ka soo haraaga cawska. Caanaha "dhirta" diyaar u ah inay cabaan habeenkii kuleylka.
Iyada oo cudur ah ee rhinitis atrophic Saddex qaado oo sage ah ku dar 0.5 litir oo biyo ah. Si tartiib ah u dabool weelka ku dheji faleebo mustaqbalka ah, loona kululeeyo laba saacadood oo feylnaayo faashad. Dheecaan faleebo waxay sanka ka qaadaan dhowr jeer maalintii (way dhaqayaan).
Isticmaalka heeso leh xasuus yar
Xusuustu qofku wuu daciifiyaa oo keliya ma'aha da'da qaangaarka ah, laakiin sidoo kale inta lagu jiro sarkhaansanaanta, sigaarcabka, walwalka, ama hurdo la'aan. Wixii xadgudub ah ee noocan ah waxaa jiri kara kumanaan sababo kala duwan. Geedaha qaarkood ayaa caawiya xoojinta waxqabadka maskaxda. Sida laga soo xigtay khubarada, heesta waxay kordhinaysaa diirada kiimikada maskaxda ee mas'uulka ka ah gudbinta fariimaha intracerebral.
Shaqaalaha Jaamicada Northumbria waxay sameeyeen cilmi-baaris ay 44 qof oo mutadawiciin ah si xushmad leh loo siiyay caleemo ama placebo. Waxaa lagu soo gabagabeeyay in ka qaybgalayaasha lagu daaweeyay caleemo, si fiican u gudbay imtixaannada. Waxaa la aaminsan yahay in daaweyn la socota daaweyn daaweyn ay natiijo fiican ka bixin doonto dagaalka lagula jiro cudurka Alzheimers.
Sidee loo isticmaalaa sage ee daaweynta dhalmo la'aanta
Kaydinta dhirta ee daawada iyadoo lagu darayo geedo xawaash oo ku habboon shaaha, decoctions iyo tinctures. Maaddada kookheerka leh xajinta qoyaanka, dhuujiyo oo dibudhis maqaarka. Noocyada Sajiyeyaasha waxay u dhaqmaan sida aphrodisiac iftiin ah. Tinctures ee isku dhafka isku dhafan ee ubaxyada iyo ubaxyada ubaxu waxay kordhiyaan libido iyo daaweynta ay ka badbaadiyaan dumarka sifo.
Aqoonyahanka Engalychev, oo ah cilmibaadheere sare oo ka mid ah hantida dhirta daawada, 1948-kii ayaa ku taliyay isticmaalka cabitaanka sageedka lagu qasi karo qadar yar oo milix ah oo lagu daweynayo ilmo la'aan.
Sage abuurka, lagu qooyey khamri sabiib ah, muddo dheer ayaa loo isticmaalay si loogu diyaariyo tinctures ka dhalmo ilmo. Xataa dunidii hore ee haramka, wadaaddada wadaaddada waxay ogaadeen xiriirka u dhexeeya isticmaalka sage by haween iyo uur. Wadaaddada wadaaddada waxay siiyeen barbaariyeyaasha oo ay la socdaan dumarka da'da yar ee tababaran si ay u diyaariyaan shaahyadaas.
Faleebo loogu talagalay daaweynta dhalmo la'aanta:
1 tbsp. l qalajinta qalalan;
1 tbsp. biyo kulul.
Ku shub biyo karkaraya dulsaar, ku dabool weelka adigoo si adag u xiran una sii haaya rubuc saacad ah. Faleebo cabitaan 3-4 jeer maalintii cabitaan saddexaad 30 daqiiqo cuntada ka hor.
Ka bilow inaad cabto cawska isla markiiba dhammaadka caadada kadibna sii wad daaweynta 11 maalmood. Dhamaadka koorsada daaweynta dabiiciga ah, nasasho ee soo dhawaynta ugu yaraan laba bilood waa lagama maarmaan.
Sage iyo naas-nuujin
Sage waxay waxyeello u tahay hooyooyinka kalkaalinta, maadaama ay cunayaan geedkan yar yar iyo joojinta nuujinta. Haa, iyo fareebka garaashka, waxay ku kicin karaan caloosha ilmaha.
Marka uu ilmuhu korayo oo uu kudhow yahay in laga baxo, haweenka waxaa loo qoraa sage. Marka caanaha la wadaago caanuhu way yar yaraataa, ilaa inta ay nuujintu joojinayso gebi ahaan.
Nuujinta joojin la'aanta ah waxay u oggolaaneysaa haweenka inay ka fogaadaan naaso.
Sida loo qaato bukaanka cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirka (GIT)
Salvia officinalis waxay muujisaa sifooyinka wanaagsan ee daaweynta boogaha caloosha iyo cudurrada mindhicirka. Dhakhaatiirtu waxay u qori karaan xanuunka qanjirada, caloosha iyo geedi socodka bararka.
Marka barar lagu sameeyo saliingaha la isticmaalo tincture laga bilaabo boobka biyaha karkaraya: 5 g oo geedo qoyan la qalajiyey ayaa lagu qiyaasaa weel iyo 0.5 l oo biyo ah karkaraya dusha sare. Ku dabool daboolka sare ee sarre. Cab 50 ml 2-3 saacadood.
Haddii beeryaradu ay dhibsadaan, diyaariso daawada: qaado shan qaado oo ah caleemo caleemo ah, yar yar iyo calendula. Isku qas geedo. Next, samee shaaha dabka iyo cabitaanka ilaa ay joojiyaan xanuunka. At 1 tbsp. Hal koob oo biyo kulul ah ayaa la qaadaa iyada oo beedka ka mid ah isku dar ah ee caleemo.
Cudurrada xanuunka ama duodenitis: 2 qaado ah oo caleemo ku shub 2 tbsp. biyo karkaraya. Saacad ayaa ku adkeysanaysa. Isticmaal labadii saacadood iyo 1 tbsp. qaaddo. Cabbitaanka suufka illaa xanuunka baaba'o.
Salvia caloosha ayaa badanaa la isticmaalaa, si fudud adoo isticmaalaya shaaha lagu daaweeyo mar maalintii. Si aad u karsato sida shaah: 1 tbsp. l Sage ku shubtay 0.5 litir oo biyo ah karkaraya kuna adkeyso 10 daqiiqo.
Marka la daaweynayo daawooyinka cudurada halista ah iyo qiyaastooda waa in ay go'aamiyaan dhakhtarka. Is-daaweyntu waa wax aan la aqbali karin!
Isticmaalka salka daawada ee ilkaha
Noocyada dawada ee antiseptic ee dhirta waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dhakhaatiirta ilkaha inta lagu jiro dhiig cirridka iyo stomatitis.
Si loola dagaallamo mindhicirka, dhoobo ayaa loo isticmaalaa kuwaas oo ka kooban sageaha saliidaha muhiimka ah.
Daaweynta cudurka cirridka, dhuunta ama dhuunta ayaa kaa caawineysa isku dar ah decoction sajilan iyo decoction jilicsan. Si aad u diyaarsatid daawadan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 5 g oo ah shaandhada qalalan ee 1 koob oo biyo ah oo karkari dabka yar 10 daqiiqo. Marka xigta, qaado 5 g oo ah jilif geedkii oo qallalan oo loogu talagalay 1 tbsp. biyaha oo la karkariyo karkari yar 10 daqiiqo. Maraqyada diyaarka ah ayaa yar yar la qaboojiyey, isku dhafan oo geddigoodana waa la qalajiyey. Maraqku waa diyaar, ka hor inta isticmaalku u baahan yahay in la kululeeyo. Gargle leh decoction kulul dhexdhexaad ah kasta laba saacadood kasta.
Haddii ilkahaaga uu xanuunsado, codso Dib-u-hagaajinta: 1 qaado oo ka mid ah geedo yaryar qaato galaas biyo ah, biyo kulul ilaa 10 daqiiqadood oo ku luqluqo diirimaad diirran. Isu-soo-ururinta ilkaheeda, dib-u-hagaajinta dhirta, isku day in aad dareeraha ku ilaaliso iliga diiqada dhowr daqiiqadood. 8-10 noocaas oo kale ah ayaa lagu sameeyaa 20-30 daqiiqo.
Isticmaalka sajinta daawada ee ujeedooyinka qurxinta
Decoction Sage waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo timaha. Ku xoqida dib-u-gurasho ama maaskaro si aad timaha u isticmaasho iyada oo la joojiyo timaha lumis iyo nalalka oo dhan. Hoos waxaa ka mid ah cuntooyinka timaha leh daawada dhirta.
Tincture loogu talagalay dib u soo kicinta timaha
0.5 litir oo vodka ah;
0.5 litir oo tufaax ah oo tufaax ah;
7 tbsp. l caleemo qoyan;
7 tbsp. l caleemaha rosemary la jajabiyey;
15 farshaxan. l caleemaha nettle.
Isku qas geedo yaryar, ku rid weel quraarad leh dabool adag, ku shub vodka iyo ku dar khalka tufaaxa. Cork oo hayso tincture meel qabow, mugdi ah muddo laba toddobaad ah. Tincture ruxin maalin kasta. Marka uu dhaco dhaleeceynta - daadi. Tincture diyaar u ah isticmaalka. Ku hay qabowga. Iyadoo tincture dhameystiran si ay u sameeyaan maskooyinka timaha.
Habka loo isticmaalo tinctures
Codso faleebo si aad u qallajiso, timo dhaqday. Si siman u faafi timaha adoo sheyga saaraya xididdada timaha. Sii wad ilaa 5-7 daqiiqo. Dhamaadka qashinka, ku duub timo polietene ah iyo xidh dhar. Timo dufan, maaskaro ayaa habeenkii ka tagtay. Haddii timuhu caadi yahay, maaskarada ayaa la dhaqaa kadib laba saacadood kadib. Koorsada daaweynta - shan iyo toban maskaxeed, marxaladaha habraaca - laba maalmood gudahood.
Rinse decoction si loo xoojiyo timaha
2 tbsp. l caleemo qajaar ah;
300 ml biyo karkaraya.
Ku shub biyo karkaraya cawska, dabool dabool oo ku adkeyso nus saac. Cadaadis maro cadaadis iyo timo maydhin kadib markii aad dhaqday.
Haddii timuhu dheeraado, waxaa lagu talinayaa in la kordhiyo seddexda jeer.
Daboolka timaha dharka leh
2 tbsp. l xidid adag oo la jajabiyey;
1 tbsp. l ubaxyo la jajabiyey;
1 tbsp. l ubax dhirta lagu jajabiyey;
2 litir oo biyo ah karkaraya.
Isku dar walxaha qalalan, ku shub biyo karkaraya kuna adkeyso 30 daqiiqo weel xiran. Cadaadiska faleebo oo biyo raaci nadiif ah. Timaha qalaji adigoon dhaqin.
Ma taqaanaa? Kareemka, kaas oo ka kooban soo saarista maqaarka, wuxuu dib udhigaa maqaarka heerkulka.
Maqsinka subaxda leh ee barafka barafku waa mid aad u faa'iido leh wajiga. Barafka jimicsiga waxaa laga sameeyey decoction ah oo caleemo, oo ay ku jiraan decoction qoobka. Maqaarka leh barafka wuxuu keenayaa in si dhaqso ah loogu kiciyo hababka dheef-shiid kiimikaad ee jirka. Elasticity waxay ku soo noqotaa maqaarka, caday. Dhallinyaro yar yar ayaa ka baxa. Sage wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada maqaarka.
Samee faleebo loogu talagalay in lagu sii qaboojiyo waa fududahay:
1 tbsp. l Sage ku shubtay 1 koob oo biyo ah oo karkaraya oo lagu bakhtiiyey nus saac. Ka dib markaa, faleebo ayaa lagu shubaa caaryada loogu talagalay barafka barafka ah waxaana loo diraa qaboojiyaha.
Waa muhiim! Haddii aad qabto cillad maskaxeed, barafka wajiga lagu jeexay si gebi ahaanba waa laguu diidaa.
Sida loo iibsado loona kaydiyo daawada
Diyaargarow daawo ah oo ka timaadda dhirta waxaa lagu abuuray iyadoo ku saleysan caleemaha cusub ama la qalajiyey ee geedka. Si aad u ilaaliso dhamaan qiimaha qiimaha leh, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato waqtigeeda oo si habboon u qalalan.
Xeerka ugu horreeya ee ururinta dhirta daawooyinka - ka soo ururinta geedo ka fog jidadka iyo magaalooyinkasidaa daraadeed dhirtu ma nuugayso birta culus ama kiimikooyin waxyeello leh. Daaweynta xaraashka ah ee daawada sage waxaa loo isticmaali karaa laba sano.
Xilliga Xilliga Xagaaga
Qodobka ugu sarreeya ee saliidaha lagama maarmaanka ah ee ku jira sage-ga waa bilowgii xagaaga. Caleemaha iyo ubaxyada la ururiyo bisha Juun waxay leeyihiin qiimaha ugu weyn. Bilow ururinta garaashka bilawga ubaxa.
Caleemaha cagaarsho leh oo caafimaad qaba waxay ku haboon yihiin meelaha banaan. Calaamadaha ugu horreeya ee ubaxyada ubaxu waxay jaraan albaabada iyagoo leh inflorescences.
Marka ururinta, ubaxa looma ogola inay dhacaan. Si taxaddar leh oo taxaddar leh u ururso ubaxyada iyo caleemaha qalajiyey Sajinta salvia caanaha waxaa lagu dhigaa warqad ama maro ku yaal hooska, meelo hawo wanaagsan leh. Waxaa suurtogal ah in la qalajiyo dhirta daawada ee gobolka laga joojiyay, qaabka ay ka midka yihiin. Sajinta qoynta waa 18-20 maalmood. Marka geedka blooms, joojinta goynta.
Sage goosashada xilliga dayrta
Bilowga xilliga dayrta cusub caleemaha yar yar waxay ku koraan dhirta, sage waxay bilaabaan inay tuuraan ubax mar labaad, iyo ururinta xawaashka daawada ayaa la sii wadi karaa. Goynta xilliga dayrta waa mid aan qiimo lahayn oo qiimo jaban ah oo lagu ururiyo bisha Juun. Xilliga xilliga kuleylka ee xilliga kuleylka ee xagaaga. Sababtoo ah roobabka dayrta, qalajinta dhirta mararka qaar waa adag tahay. Waxaad qallajin kartaa geedo la soo ururiyey foornada heerkul ah 40 ° C iyo fiilada foornada.
Caleemaha la jajabiyay ee la qalajiyey iyo ubaxyo daaweyn ah ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah diyaarinta dhirta oo adag. Wixii daaweynta cudurrada maqaarka, boogaha iyo nabarrada loo isticmaalo caleemo cusub oo caleemo ah. Daaweynta hargabka ayaa ugu fiican shaaha iyo shaaha shaaha lagu daray.
Iyadoo ay saldhig u yihiin saliidaha sage, boomaatada iyo shumaca ayaa loo sameeyey isticmaalka dibadda. Nolosha shafka ah ee boomaatada noocan oo kale ah kama badna 18 bilood.
Toolfiiqyada khamriga ah ee leh xajinta loo isticmaalo cadaadiska iyo looska. Tincture alkolada noocan oo kale ah waa in lagu kaydiyaa dhalooyinka mugdi madow oo iska ilaali qoraxda tooska ah. Haddii dhammaan xaaladaha kaydinta la buuxiyo, tufaaxa khamrigu ma lumiyo hantidooda faa'iido leh muddo laba sano ah.
Alcohol Tinctures loo isticmaalo daroogo leh falgal liddi ku ah antiseptic iyo antispasmodic. Goobaha biyaha ku salaysan loo isticmaalo gynecology iyo daaweynta cudurka macaanka.
Waa muhiim! Daaweynta guriga dhexdiisa, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in infusions iyo decoctions caleemaha qoyaanka ay u fiican yihiin shubanka, sida daroogada kaadi-macaan iyo daawooyinka anti-bararka. Waxay hagaajiyaan dheefshiidka, yareeyaan dhididka oo waxay leeyihiin guryaha tonic.
Qofka isticmaala garaashka waxyeello ayuu u geysan karaa
Daawo kasta waa in si taxadar leh loo isticmaalo, iyo geedo halkan - ma aha mid ka reeban. Salvia officinalis sidoo kale waxay ka hortagto.
Iyada oo dhammaan faa'iidooyinka iyo tayada daawada ee heesta laguma talin dadka qaba dhiigkarka sareeya iyo dhiig-baxa, bukaanka qaba suuxdinta iyo dadka ku jira xasilloonida dareenka.
Hooyooyinka kalkaaliyaasha ah waa in ay ka fogaadaan isticmaalka daroogooyinka ama geedaha, oo ay ku jiraan sage.
Tan iyo markii xajinta ay kordhiso qiyaasta estrogen ee jidhka oo hoos u dhigta cadaadiska dhiigga, waa Laguma talin dumarka ka dib hawlaha kansarka naasaha, ilmo galeenka, endometriosis iyo hyperplasia.
Waa muhiim! Sage ayaa si adag u horjoogsatay cudurka kelyaha, qufac qallalan iyo cudur qanjir ah.
Qarniyo badan, warshadani waxay bogsataa oo taageertaa jirka bani'aadamka, dadkuna waxay sii wadaan inay baaraan cusub oo cusub oo bogsoon leh oo daaweyn leh.